Knowledge – Page 65 – WunYan
ကမ္ဘာပေါ်တွင် သူခိုးမရှိသော နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ (အံ့သြလွန်ပြီး သေနိုင်တယ်)
ကမ္ဘာပေါ်တွင် သူခိုးမရှိသော နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ရှိခဲ့ဖူးသည်။ ထိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံပင်။ ထိုစကားကို ပြောခဲ့သူမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီပင် ဖြစ်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် သူခိုးမရှိသော နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ရှိခဲ့ဖူးသည်။ ထိုသည်မှာ မြန်မာ နိုင်ငံပင်။ ထိုစကားကို ပြောခဲ့သူမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီပင် ဖြစ်သည်။ အီဂတ်ပူရီပြည်နယ်၌ ဗုဒ္ဓ၏ ၀ိပဿနာ တရားတော်များကို ကမ္ဘာသို့…
တစ်ရာသီကို မြန်မာငွေ သိန်းရာချီရတဲ့ ကြာမြစ်
ဆောင်းရာသီကို ၀င်လာပြီဆိုတာနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ကျန်းစီးပြည်နယ် မှ လယ်သမားများဟာ ကြာပင်ရဲ့အမြစ် တူးဖော်တဲ့လုပ်ငန်းကု ဆောင်ရွက်ရင်း အလုပ်များလို့နေကြပါပြီ။ ကြာမြစ်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံတွင်းမှာ အလွန်ကျော်ကြားလှတဲ့ ဟင်းလျာ တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ထူထပ်လှတဲ့ ရွှံ့နွံ့တောထဲကနေ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ ကြာမြစ်တွေကို အရယူဖို့အတွက် သင့်လျော်တဲ့စက်ပစ္စည်း ကြံဆတီထွင်နိုင် ခြင်း မရှိသေးတာကြောင့် လူ့လုပ်အားဟာ ကြာမြစ်တူးဖော်ရေးမှာ အဓိက အခန်းကဏ္ဍကရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လယ်သမားတွေဟာ တစ်ရက်ကို ရှစ်နာရီကျော်လောက်…
မိမိတို့အိမ်၌ မပြုသင့် မထားသင့်သော ရှောင်ရန်များ
မိမိတို့အိမ်၌ မပြုသင့် မထားသင့်သော ရှောင်ရန်များ ၁။ အိမ်ရှေ့၌ ငှက်ပျေားပင် မစိုက်အပ်။ ၂။ ရေစိုအဝတ်များကို ညအချိန် သစ်ပင်ပေါ် အဝတ်တန်းပေါ် မထားရ။ ၃။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ အပြောဆိုမကြမ်းရ။ ၄။ လက်ဖက်သုတ်စားပြီး ကလေး၏ ပါးကိုမနမ်းရ။ ၆။ ကတ်ကြေး၊ ကွမ်းညှပ်၊ ဓား စသည်တို့ကို ညှပ်စရာမပါပဲ မညှပ်ရ၊ မဖြတ်ရ။ ၇။ အိမ်ပေါ်၌ ဇယ်မခုတ်ရ။…
သင်ဘယ်တော့မှ ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာစေတဲ့အချက် (၉) ချက်
သင်ဘယ်တော့မှ ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာစေတဲ့အချက် (၉) ချက် လူတိုင်းလိုလိုချမ်းသာချင်ကြပါတယ်။ ချမ်းသာအောင်လည်း အချိန်တိုင်းကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာလို့ လူတိုင်းမချမ်းသာတာလဲ။ အချို့ကတော့ ဘဝပေးကုသိုလ်ဆိုပြီးပြောကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တော့မဟုတ် ပါဘူး။ မချမ်းသာရခြင်း အကြောင်းအရင်းကတော့ အခြေခံလိုအပ်ချက် လေးတွေကိုတောင် မပြုပြင်နုိုင်လို့ပါ။ အောက် မှာပါ အချက်တွေထဲက တစ်ချက်ချက်ကို သင်လုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ သင်ချမ်းသာဖို့ဆိုတာ အတော်လေးကိုဖြစ်နုိုင်ချေ နည်းသွားပါပြီ။ (၁)သင်ဟာ ပိုက်ဆံ စုခြင်းကို…
အရွက်မှအစ အမြစ်အဆုံး ပဉ္စငါးပါးစလုံး ဆေးဖက်ဝင်သည့် သြဇာပင်
Posted on September 23, 2017 September 23, 2017 by whuk-46651
အရွက်မှအစ အမြစ်အဆုံး ပဉ္စငါးပါးစလုံး ဆေးဖက်ဝင်သည့် သြဇာပင် သြဇာပင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဒေသ အနှံ့အပြားတွင် ပေါက်ရောက်လေ့ရှိပြီး အလယ်ပိုင်း ဒေသများ၌ အလေ့ကျပေါက်သည်ကို တွေ့ရသည်။ မြန်မာ ဆေးကျမ်းများအရ သြဇာသီးသည် အေး၍ သွေးအားကိုတိုးပွားစေသည်။ နှလုံးကို များစွာအကျိုးပြု၍ ပူလောင်ခြင်း၊ လေပူရောဂါနှင့် သွေးအန်ရောဂါများကို ပယ်ဖျောက်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ သြဇာရွက်ကို ကြိတ်၍စားခြင်းဖြင့် သန်ကျစေပြီး အရွက်ကို ချေ၍ရှူပေးပါက အမူးအမော် သက်သာစေသည်။ သြဇာသီးအစိမ်းသည်…
တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပါက ဘယ်နိုင်ငံတွေက အန္တရာယ်အကင်းဆုံးဖြစ်မလဲ
တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပါက ဘယ်နိုင်ငံတွေက အန္တရာယ်အကင်းဆုံးဖြစ်မလဲ မြောက်ကိုရီးယားနှင့် အမေရိကန်ရဲ့ စစ်ရေးတင်းမာမှုဟာအပြင်းထန်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတာမို့ တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်ပြောဆိုမှုများရှိလာပါတယ်။ ခေတ်အခြေအနေပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ လက်နက်တွေကလဲ ပိုမိုစွမ်းအားပြင်းထန်ကောင်းမွန်လာမို့ တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်မှာကို ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကပြည်သူတွေ စိုးရိမ်နေကြပါပြီ။ ထိုကဲ့သို့ ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပါက ဘယ်နိုင်ငံတွေက စစ်ဘေးအတွက် အကာအကွယ် အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ သုတဇုန်က စုစည်း ဖော်ပြမှုကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ။ 1. Switzerland2. Tuvalu 3….
တစ်ကိုယ်ရေ လိင်စိတ်ဖြေသော စွဲလမ်းမှု ဖျောက်ဖျက်ရန် နည်းလမ်းများ လူငယ်လူရွယ်များစွာအတွက် တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ်မှ နှစ်ကြိမ်အထိ မိမိဘာသာ လိင်စိတ်ဖြေဖျောက်ခြင်း (masturbation) သည် သာမန်ပင်ဖြစ်သည်။ သီတင်းတစ်ပတ်လတွင် သုံးကြိမ်မှ ခုနစ်ကြိမ်အထိ မိမိဘာသာ လိင်စိတ်ဖြေခြင်းသည် ပြဿနာမရှိသော်လည်း အသက်(၃၀) ကျော်၊ (၄၀)ကျော်အရွယ်၌ အကြိမ်ရေလျော့သွားနိုင်သည်။ သို့သော် လူများစွာအတွက် မိမိဘာသာ လိင်စိတ်ဖြေခြင်းသည် ထိန်းမနိုင်ဖြစ်လာနိုင်ပြီး စွဲလမ်းသော အလေ့အထတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။…
ဖုန်းမှန် ကွဲနေတာ ဆက်သုံးရင် ဖြစ်လာမယ့် ဆိုးကျိုးတွေ စမတ်ဖုန်း ကိုင်ဆောင်ရတဲ့သူတိုင်း အချိန်မရွေးကြုံတွေ့လာနိုင်တာကတော့ ဖုန်း မှန်သားပြင် ကွဲသွားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးရဲ့ တန်ဖိုးဟာ နည်းပါးလွန်းတဲ့ ပမာဏ မဟုတ်တာကြောင့် အသစ် တစ်လုံးနဲ့ ချက်ချင်းလဲဖို့ဆိုတာလည်း သိပ်တော့မလွယ်ကူလှပါဘူး။ မိမိတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ဖုန်းမှန်ကွဲ နေပေမယ့် ဆက်သုံးတဲ့ မိတ်ဆွေ တွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကိုလည်း ဒီ…
သင့်ရဲ့ လက်ဖဝါးမှာ ” X ” လက္ခဏာ လမ်းကြောင်းလေး ရှိနေရင်တော့
သင့်ရဲ့ လက်ဖဝါးမှာ ” X ” လက္ခဏာ လမ်းကြောင်းလေး ရှိနေရင်တော့ လက်ဖဝါးပြင် နှစ်ခု စလုံးမှာ “X” လက္ခဏာလေး ပါရှိပါက ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ ဖြစ်တက်ပါတယ်။ ဒီလို လက္ခဏာ ပါဝင်တဲ့ သူတော်တော်များများက အောင်မြင်တဲ့ လူကြီး လူကောင်းတွေ ဖြစ်တက်တယ်။ လူသားအားလုံးနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ ကောင်းမွန်တယ်။ ဘဝမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှု့တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတက်တယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်း ကြည့်ကောင်းတယ်။…
သင်လုံးဝမသိသေးတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဒီအရည်အချင်းတွေ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် နေ့စဉ် တရားထိုင်လေ့ရှိပါတယ်။ – ခြေလေးချောင်းသားများကို ရှောင်ပြီး ပင်လယ်စာကြိုက်တတ်ပါတယ်။ – ကိုယ်အလေးချိန်မှာ ၁၀၆ ပေါင်ခန့် ရှိပါတယ်။ – အသားအရည် ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အလှပြင်ဆိုင်ကိုသွားပြီး အထူးတလည် ထိန်းသိမ်း ပြုလုပ်ခြင်းမရှိဘဲ သာမာန်မိန်းကလေးများ ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ အသားအရည်ထိန်းသိမ်းတဲ့ နည်းလမ်းများသာ အသုံးပြုတတ်ပါတယ်။ – အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုသည့် အမည်သည် ဖခင်ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အမည်မှ…